Global Voices teny Malagasy » Mahatonga Ny Zazavavy Ho Marefo Manoloana Ny Fanararaotana Ny Lalàna Sy Ny Toe-tsain’ny Fiarahamonina Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Oktobra 2016 10:11 GMT 1	 · Mpanoratra Thant Sin Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Shina, Singapaoro, Mediam-bahoaka, Mpitsoa-ponenana, Politika, Tanora, Vehivavy sy Miralenta, Vonjy Voina, Zon'olombelona
Inona no tianao hambara amin'ny zazavavy manerana an'i Myanmar amin'ny Andro Iraisam-pirenena Ho an'ny Tovovavy? “Mianara mafy sy miasà mafy mba ho tanteraka ireo nofinofinareo. Mirary ny nofin'ny zazavavy rehetra ho tanteraka izahay.” – Ankizivavy monina ao amin'ny tobin'ny olona mifindra toerana ao anatin'ny firenena ao Kachin. Sary sy lahatsoratra : Planina Iraisampirenena ao Myanmar. Nahazoana alàlana.
Tamin'ny 11 Oktobra 2016, nankalaza ny Andro Iraisampirenena ho an'ny Zazavavy  tao amin'iray amin'ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana anatiny ao amin'ny fanjakana Kachin, faritra avaratr'i Myanmar, ny Planina Iraisampirenena ao Myanmar. Mipetraka ao amin'ny toby akaikin'ny sisintanin'ny Shina-Myanmar nandritra ny enin-taona noho ny fifandirana indray teo amin'ny Tafiky ny Fahaleontena ao Kachin  sy ny miaramilan'i Myanmar ireo ankizivavy nandray anjara tamin'ny fankalazana.
Nandritra ny lanonana, nanasongadina  ny olana toy ny filana ny fiarovana noho ny herisetra sy ny fanatsarana ny fiarovana ao amin'ny toby indrindra fa amin'ny alina ireo ankizivavy. Nanamarika ny iray amin'ireo mpitantana ny toby fa miatrika olana  ny tovovavy monina ao amin'ny toby :
Miaina ao anatin'ny tontolo tena be olona izahay ary misy olona 8 na 9 eo ny tokantrano sasany, anisan'izany ny zatovolahy. Olana lehibe ny fiainana manokana ao amin'ity toby ity ary noho izany tsy maintsy mandray andraikitra izahay amin'ny fiarovana ny ankizivavy ao amin'ny fianakavianay sy ny vondrom-piarahamoninay, satria tandindonin-doza kokoa ireo ankizivavy noho ny ankizilahy.
Tena tandindonin-doza ireo ankizivavy sy ny vehivavy noho ny herisetra sy ny fanararaotana ao Myanmar. Nanomboka tamin'ny fahatongavan'ny governemanta sivily vaovao tamin'ny 2011, ezaka lehibe ny tolona ho amin'ny fitovian-jo sy ny fanoherana ny herisetra atao amin'ny vehivavy manoloana ny fiarahamonina demokratika kokoa ao amin'ny fanovana ara-tsosialy ao Myanmar . Na izany aza, mbola tandindonin'ny fampijaliana ny vehivavy maro ao Myanmar ankehitriny raha tsy misy ny fiarovana ara-pitsarana . Matetika mamela ireo vehivavy tsy hanan-kery  hanoherana ny fanararaotana toy izany ny fanekena ny kolontsaina sy ny fahanginana manoloana ny herisetra an-tokantrano.
Vao tsy ela izay, natsangana tamin'ny alàlan'ny fanokafana ny fampitam-baovao tao an-toerana ny fanentanana bebe kokoa natao tamin'ny vahoaka mikasika ny herisetra an-tokantrano manoloana ireo ankizivavy tsy ampy taona. Tamin'ny volana lasa, nanaitra ny saina manerana ny firenena ny zazavavy roa 16 sy 17 taona izay nampiasaina ho mpiasa an-trano tao amin'ny fivarotan'ny mpanjaitra iray tao an-tanànan'i Yangon rehefa nitatitra herisetra ara-batana  sy fanagadrana an-trano nandritra ny dimy taona ny mpanao gazety tao an-toerana .
Vao mainka tezitra ny vahoaka rehefa tsy nahavita niaro azy tamin'ny fitsarana ara-dalàna ny Vaomiera Mpiaro ny Zon'olombelona Nasionaly ao Myanmar (MNHRC) fa nihonona  tamin'ny onitra avy amin'ny fianakaviana izay nanararaotra ireo ankizivavy. Nametraka fitoriana ilay fianakaviana  teny amin'ny fitsarana ny vondron'ny mpitandro ny filaminana miady amin'ny fanondranan'olona. Nisy mpanao lalàna ihany koa niantso ny hanoloana ny mpikambana ao amin'ny MNHRC  noho ny fanaovana an-tsirambina ny raharaha.
Nampiseho taratra ny toe-tsain'ny fiarahamonina manoloana ny tanora mpiasa an-trano ny lahatsoratra nalaza be amin'ny fanamarihana  nataon'iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny MNHRC .
“Inona no mahagaga amin'ny famonoana mpiasa an-trano? Izaho koa mamono ny mpiasa an-tranoko “. Te hitory eny amin'ny fitsarana ity kaomiseran'ny MNHRC Daw Mya Mya, izay nanaiky izany teo anoloan'ny fampitam-baovao, ny olona.
Ankoatra izany, nanaitra ny ahiahy amin'ny herisetram-panararaotana ny tovovavy Myanmar ihany koa ny fahafatesan'ny mpiasa an-trano Myanmar iray vao maty tao Singapaoro. Namoaka lahatsari-panadihadiana  momba ny raharaham-barotra tsy ara-dalàna amin'ny fandefasana ireo ankizivavy Myanmar tsy ampy taona hiasa ho mpiasa an-trano any Singapaoro i Al Jazeera. Ahitana herisetra ara-batana, fanolanana sy fanagadrana an-trano ny zava-tsarotra izay atrehan'ireo ankizivavy.
Eo amin'ny sehatra maneran-tany, manasongadina ny hantsana eo amin'ny lahatahirin'ny Governemanta momba ny ankizy, ankizivavy ny ankamaroany, miatrika ny fanararaotana sy ny tsy fitoviana, ny tatitra vao haingana ‘Manisa ny tsy hita maso ‘ navoakan'ny Planina Iraisampirenena. Nanamarika ny fikambanana mpiaro ny zon'ny ankizy fa tsy mahavita manafoana ny fanararaotana sy ny tsy fitoviana izay atrehin'ny ankizivavy an-tapitrisany ireo governemanta raha tsy tsara kokoa ny antontanisan'ny zavamisy iainan'ireo ankizy ireo. Hoy ilay tatitra:
Amin'izao fotoana izao tsy misy ny antontan'isa azo antoka maneran-tany izay mampiseho ny tena olana amin'ny fiainan'ny tovovavy, toy ny hoe firy ireo mandao ny fianarany noho ny fanambadiana aloha loatra, ny fitondrana vohoka na ny herisetra ara-nofo, na firy ny ankizivavy latsaky ny 15 taona lasa reny.
Fehiny, maneho ny tsy fisian'ny lahatahiry  sy ny tsy fisian'ny fiarovana avy amin'ny Governemanta amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ao Myanmar ireo toe-javatra ireo, ary ilaina ny fahatsiarovan-tenan'ny tsirairay amin'ny fanovana ara-tsosialy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/10/21/90354/
 Andro Iraisampirenena ho an'ny Zazavavy: https://www.facebook.com/PlanInMyanmar/posts/1197398060328108
 Tafiky ny Fahaleontena ao Kachin: https://en.wikipedia.org/wiki/Kachin_Independence_Army
 raha tsy misy ny fiarovana ara-pitsarana: http://www.myanmar-now.org/news/i/?id=8cf2bacc-e043-4304-9a01-27ae8222a0e5
 tsy hanan-kery: http://www.genmyanmar.org/publications/Behind%20the%20SilenceFullReportEnglish.pdf
 herisetra ara-batana: http://www.irrawaddy.com/burma/tailor-shop-abuse-case-goes-to-court.html
 Manisa ny tsy hita maso: https://plan-international.org/because-i-am-a-girl/counting-invisible-girls